Sida loo isticmaalo iPhone in la Qaado Photos Tixan on iPhone
Photos dusha waa fikrad loo waxyooday ka farshaxankiisa hore u muujinayaa goobaha in xagal ballaaran in sawir dhab ah ma ku haboon kartaa in. Male dadka iyo damaca in ay qabsadaan walba mid ka mid ah, Fanaaniin, ee goobta galay sawir hal banneeyeen ah in sawiro dusha. Waa dareen la yaab leh in la ogaado sida goobta ah 360 digrii heli taam galay 180 digrii oo ka dhigaysa lacag kala duwan iyo qanco. Dhoob laga qaaday badaha, safafka buurta, dhismayaasha qurux badan iyo harooyinka ayaa fascinatingly cajiib ah u aragti. Laakiin waxaan kartaa sawiro dusha ku iPhone naga qaado? Haa.
Sida loo sawiro dusha la iPhone qaadan?
Iyada oo ku xidhan version ee macruufka iyo version of iPhone in aad leedahay aad laga yaabo kala duwan oo ay u qaadato sawir ah dusha. In kasta oo kala duwan oo yaryar oo dhan iPhone in ay yihiin awood u qaadato sawir ah dusha wadaagaan geedi socodka la mid ah. Sawirada dusha oo keliya iPhone 4s oo lagu daydo ka dib Waxaad qaadan kartaa. Doorasho ma ahayn laga heli karaa ilaa iPhone 4.
Hoos waxaa ku qoran talaabo talaabo si ay sharaxaad qaadato sawir dusha wanaagsan oo aad iPhone.
Dooro meel aad doonayso in aad qaado sawirka dusha
Dooro goobta upka ah ka bilaabi qoro Panorama ee
Istaag meel xasiloon oo ku haboon
Fur codsiga camera ee iPhone
Tag fursadaha dooro Panorama (fursadaha ka yar tahay magacyo kala duwan ee qoraalkii kala duwan ee macruufka ah)
Waxaa lagu weydiin doonaa in ay doortaan jihada panning ah; Dooro bidix ilaa midig ama xaq u leeyahay inuu ka tagay
Tubada badhanka shutter ay u bilaabaan duubista
Dhaqaaji iPhone si tartiib tartiib ah oo dhinaca jihada loo doortay
Ha Dhaqaajinin iPhone kor iyo hoos, tani hoos u dhigi doontaa tayada image ka
Marka jir ah laga bilaabo gala aragtida mar Panorama soo Gabagabeysey (haddii aad rabto in aad joojiso dhexe ee geeddi-socodka, aad ku sawirnaa button shutter mar kale iyo Panorama ka joojin doonto meesha aad ku joogsaday.)
Guudmar sawirkaaga sida aad ku eegaan lahaa sawir kale oo aad iPhone
Waxaad edit karaa sawirkaaga dusha sida aad u sawir kasta oo kale
Si aad u leeyihiin Muuqaal dusha laga buuxa, dhajisan ee dhinac iPhone
Qaadashada sawirka dusha waa nooc ka mid ah xirfad. Haddii aad leedahay xirfad farshaxan iyo doonayay in sawir dusha wanaagsan, oo aad ka dibna waxay leeyihiin in ay doortaan meesha aad iPhone waxa uu noqon doonaa. Mid ka mid ah wax muhiim ah in la sawiro qaadashada telefoonka waa iftiinka goobta. Tan iyo telefoonada aadan bixin iftiin ku filan si ay u iftiimiyey goobta furan oo aad u leeyihiin in ay doortaan wakhti uu jiro waa iftiin ku filan.
Iyada oo lagu qoro Panorama, waxaad u leedahay in sida tartiib ah intii suurto gal ah digsi aad iPhone. Xarakada ayaa gaabis ah ee aad iPhone tayada Panorama si fiican u noqon doona. Mid ka mid ah wax aan la sameynin inta lagu guda jiro qabashada Panorama ah waa in ay u guuraan aad iPhone vertical ama kor iyo hoos. Kor iyo hoos dhaqdhaqaaqa qasin tayada sare iyo hoose cidhifyada sawirka. Inkasta oo ay jiraan heer qaar ka mid ah auto qabsiga, waxaa fiican in aad sii fududeeyo aad iPhone si loo farsameeyo. Sidoo kale, waxaad ka heli doontaa Panorama fiican.
Waxaa jira software in aad ku caawin karaan in ay masawirada dusha. Qaar ka mid ah ayaa hoos ku taxan.
Software in loo fududeeyo sawirada dusha ku iPhone
Tani waa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee laga heli karo internet-ka. Codsiga waa MB 6.6 kaliya ee size oo laga heli karo agagaarka dersin luqado ay ka mid yihiin Ingiriisi. Waxaad isticmaali kartaa app la macruufka 5 ama qoraalkii ka dib. iPod, iPad iyo iPod taabto oo dhan isticmaali kartaa app this. Waxaa sidoo kale macquul qiimihiisu yahay $1.99 boqolkiiba download.
Jaantuska: Autostitch Panorama
Tani waa mid ka mid ah codsiga kale qaadato iPhone weyn photos dusha. Codsigan waa 9.9 MB wuxuuna ku qoran yahay Faransiis, Ingiriisi iyo Japan. Yudo khayriga ah ayaa sii daayay codsiga ee 2012. Waxaa la casriyeeyay si version 1.3.5 hadda. Waxaa loo qorsheeyay in lagu taageero dhowr ah oo kala duwan oo ka mid ah qalabka socda macruufka 4.2 ama qoraalkii ka dib. Qiimaha waa $1.99
Jaantuska: Sfera Panorama
App A iPhone oo lacag la'aan ah in loogu talagalay in lagu sameeyo sawiro dusha; app tani waa ka Microsoft Corporation. App ahayd ee 2014. Waxaa uu haystaa 6.5 MB ee bannaan. Waxaa la heli karaa oo kaliya in English. App Tani waa la jaan qaada hindisooyin badan la macruufka 5 ama qoraalkii ka dib.
Jaantuska - Photosynth Panorama
Heli $1.99 codsigan qaadataa 4,8 MB meel disk. Last updated in January 2014 waa la jaan qaada ah qalab yar oo la macruufka 6 ama ka dib. App ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa in ka badan nus dersin luqado. Shirkadda soo saarta codsigan Dermandar.com ee lagu yaqaan ratings ay qaybaha dadka waaweyn.
Jaantuska - DMD Panorama
360 Panorama waa app kale u fiican iPhone in ku siin karaan tayo wanaagsan photos dusha. Waxay leedahay 3 hababka Qabsashada - Falanqeynta, video iyo hab image. Photos si fudud loo wadaagi karaa si Facebook ama Twitter. Waa $ 0.90 heli karo.
Talooyin iyo tabaha on iPhone celinta
Free kaabta iPhone shawladda: Waraaqda kaabta iPhone u Free
> Resource > iPhone > Isticmaal iPhone Qaadashada Tixan Photo